CAN 2019 : Hivantana ao amin’ny TVM sy RNM avokoa ny lalao rehetra miisa 52
Mitodika aty Afrika avokoa amin’izao ny sain’ireo mpanara-baovao ara-panatanjahan-tena sy ny mpitia baolina kitra. 11 juin 2019
Ho an’i Madagasikara manokana, ho mariky ny fiaraha-mientana amin’ny fanohanana ny ekipam-pirenena Malagasy Can 2019 dia nanambara ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo fa halefa mivantana ao amin’ny haino aman-jerim-panjakana Tvm sy Rnm avokoa ny lalao rehetra miisa 52 mandritra ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika na ny Can. Ezaka goavana io vitan’ny minisiteran’ny seraseara sy ny kolontsaina io raha ny nambaran-dRamatoa Minisitra satria dia tetibolan’ity minisitera ity madiodio avokoa no nandoavana ny 500 000 Euros saran’ny fandefasana.
Nandritra ny volana maromaro mihitsy no efa niadian-kevitra ity fampiainana mivantana ny Can ity raha ny fanazavana ary tapaka fa halefa avokoa ny lalao rehetra manomboka amin’ny 21 jona ka hatramin’ny lalao famaranana.
Raha ny fanazavan-dRamatoa minisitra hatrany dia 1 tapitrisa Euro no nofaritan’ny Kaofederasiona Afrikanin’ny Baolina kitra na ny Caf ho sandam-pandefasana ny lalao rehetra tany am-piandohana saingy amin’ny maha mpikambana an’i Madagasikara ao anatin’ny vondrona Afrikana dia nisy ny fifampiresahana ka izany indrindra no nahatonga io sandam-pandefasana io ka tafidina hatrany amin’ny 500 000 Euros.
“Fantatra ny fitiavantsika Malagasy ny baolina kitra, marobe mihitsy no nangataka io fampitana mivantana io.” “Nisy fotoana isika tsy afaka nandefa lalao tokana tao anaty fifanintsanana ary tamin’izay dia mafy dia mafy ny feo avy any amin’ny olom-pirenena. Nanaovanay ezaka manokana ny mahakasika izany ary tsy maintsy niroso tamin’ny fifampiresahana ny minisitera satria raha 1 tapitrisa Euro izany tsy zakan’ny tetibolan’ny Minisitera”, hoy hatrany ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina nanazava ny ezaka goavana nataony.
Efa vonona ny any Ejipta
Raha iverenana ny tantara dia tamin’ny volana janoary lasa teo no voatendry fa ry zareo Ejipsiana no handray ny Can 2019 satria tsy vonona no sady tsy nahafeno fepetra ny Cameroun. Manana kianja maro handraisana ny Can ny Ejipsiana ary tanàn-dehibe miisa efatra no fantatra fa handray ny lalao ka isan’izany i Le Caire, Alexandrie, Suez ary Ismaelia. Ny 03 amin’ireo kianja 06 hanatanterahana ny lalao dia ao Le Caire avokoa ary efa saika vonona sy tomombana avokoa ny fotodrafitrasa rehetra amin’izao herinandro vitsy tsy hanombohan’ny lalao izao.